Apple zvaJehovha iPhone X Holds Kukosha Its Kupfuura Chero Previous iPhone - China Gracebestbuy International
Apple zvaJehovha iPhone X Holds Kukosha Its Kupfuura Chero Previous iPhone
Kana uri kutarisa kutenga chinhu iPhone kuti anogona kuchengeta kukosha kwayo, tarisa hapana kupfuura Apple raMwari iPhone X.
Mune imwe ongororo ichangobva kuitwa, liquidation kambani B-Stock akaongorora iyo iPhone anoita zvakanaka basa zvokukunda kukosha kwayo. The iPhone X vakabuda pamusoro kuburikidza ukaramba 85% yepakutanga kukosha kwayo pamusika yechipiri. Makambani kuti kutenga iPhone X zvakawanda kuti resell ari handset vari kuwana kuti 75% ayo chitoro mutengo, B-Stock yakawanikwa, maererano 9to5Mac, izvo vakawana kopi kudzidza.
Apple akasunungura yayo iPhone X gore rapera pamwe chepamusoro mutengo Tag zviri nokusingaperi Zviine kuti smartphone kambani. Mujinga iPhone X womuenzaniso kunodyira $ 999 uye shanduro dzakawanda okuchengetera anoenda for $ 1,149. The B-Stock Data zvinoraira iPhone X ndewe kanenge $ 849,15 pa Resale.
Smartphones regai yemanyorero abate kukosha kwavo zvakanaka. New features, zvakawedzerwa zvinoriumba, uye hunokwezva vakwikwidzi vanowanzotevedzera kutyaira kukosha kwavo pasi yekudyidzana. IPhones Apple kwakaita vakafirwa zvakafanana kukosha, asi avanotarisira kusimudzira nani pane vakawanda. Maererano 9to5Mac, B-Stock kuti mashoko zvinoraira iPhone X wakakugadzirirai zvinyorwa zvitsva pokupindira kukosha kwayo nani kupfuura dzimwe iPhone riri pamusika.
The Zvakawanikwa vangangova akanaka pamusoro makambani kuti kuwana kushandiswa kana akadzokera iPhones. Zvinonyaradzawo akanaka munhu muridzi ane iPhone X uye ari kuronga kutendeukira nawo kuti zano itsva gore rino. Kana chinhu chimwe, unenge kuenda refu nzira defraying mari imwe iPhone itsva.
Post nguva: Jul-30-2018